सेयर बजारको गिरावट जारी, सेयर बिक्री गर्ने क्रम पनि घट्यो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सेयर बजारको गिरावट जारी, सेयर बिक्री गर्ने क्रम पनि घट्यो
आईतवार, बैशाख १६, २०७५ १८:२३ मा प्रकाशित !
बैसाख १६, काठमाडाैं । गत साताको सोमबारदेखि निरन्तर ओरालो लागेको सेयरबजार यो साताको पहिलो दिन आइतबार पनि घटेको छ । लगातार आठ दिनसम्म बढेर घट्न थालेको सेयरबजार लगातार पाँचौ दिनसम्म ओरालो लागेको हो । बजार घट्दै जाँदा सेयर बिक्री गर्नेक्रम केही थामिदा कारोबारमा समेत कमी आएको छ ।
लगातार आठ दिनसम्म बढ्दा १६८ अंक माथि उक्लिएको बजार पछिल्लो पाँच कारोबार दिनमा निरन्तर ओरालो लागेर ९० अंक तल झरेको
छोटो समयमा बजारमा नाफा लिनेहरु सक्रिय हुँदा सेयर बजार अस्थिर जस्तो देखिएको छ । लगानीकर्तामा अन्योलता रहदा छिनभरमा बढ्ने र छिनभरमा घट्ने क्रम आइतबारको बजारमा पनि रह्यो ।
आइतबार नेप्से ८.२१ अंकले घटेर १३४९.०१ अंकमा झरेको छ । यसदिन १६१ कम्पनीका ९ लाख ६६ हजार कित्ता सेयर ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भए । अघिल्लो कराोबारको तुलनामा कारोबार रकम २३ करोड कम हो । पाँच दिनमै बजार ९० अंक तल झरेपछि सेयर बिक्रेताहरु बजार फकिर्ने आशमा थामिदा कारोबार रकममा भने निरन्तर कमी आएको छ ।
कारोबारमा आएका दश समूहमध्ये पाँच समुहका सूचक बढेका छन भने पाँच समूहका सूचक ओरालो लागेका छन् । यसदिन वाणिज्य बैंक, जलविद्युत, वित्त, अन्य र माइक्रोफाइनान्सको उपसूचक घटेको छ भने व्यापार,होटल,विकास बैंक, वीमा र उत्पादन मुलक समूहको सूचक सामान्य बढेको छ ।
आइतबारको बजारमा सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको एक करोड ५० लाखको सेयर किनबेच भयो । सेयर संख्याका हिसाबले सिभिल बैंकको सबैभन्दा धेरै ५१ हजार कित्ता कारोबार भयो ।
यसदिन पनि सबैभन्दा धेरै स्वदेशी लघुवित्तको सेयरमूल्य ९ प्रतिशतले बढ्यो भने नयाँ नेपाल लघुवित्त, उन्नती माइक्रोफाइनान्स तथा श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स लगायतको सेयरमूल्य बढेको छ । सबैभन्दा वरुण हाइड्रोका सेयरधनीले झण्डै आठ प्रतिशतका दरले गुमाए । जानकी फाइनान्स, युनाइटेड मोदी, प्रभु बैंक लगायतको सेयरमूल्य घटेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: संसारकै सबैभन्दा सुन्दर बडि बिल्डरका भाइरल फोटोहरू
NEXT POST Next post: भारु नोट साट्ने र नेपाली ग्याँस बुलेटबारे भारतको असहमति !
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, बैशाख १६, २०७५ १८:२३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, बैशाख १६, २०७५ १८:२३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, बैशाख १६, २०७५ १८:२३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, बैशाख १६, २०७५ १८:२३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, बैशाख १६, २०७५ १८:२३